ကန ဦး အလေ့အကျင့်နှင့်မဖြစ်မနေအရက်အသုံးပြုခြင်းကို ventral မှ dorsal striatum သို့ (၂၀၁၀) ပြောင်းခြင်းအပြောင်းအလဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ (Your Brain On Porn) ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
ကနဦး, လေ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအရက်သေစာအသုံးပြုမှု dorsal striatum (2010) မှ ventral ထံမှ cue အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်
စွဲလမ်း။ 2010 OC ။t;105(10):1741-9. doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03022.x.
Vollstädt-Klein က S1, Wichert S ကို, Rabinstein J ကို။, Bühler M က, Klein အို။, Ende, G ။, Hermann: D, မန်း K သည်.
မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည့်အခါကန ဦး hedonic သက်ရောက်မှုများကျဆင်းလာသည်။ တိရိစ္ဆာန်သုတေသနကဤပြောင်းလဲမှုများကို prefrontal cortical ထိန်းချုပ်မှုမှ subcortical striatal ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ventral မှ striatum ၏ dorsal domains များသို့ striatum အတွင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်, သို့သော်လူသားများတွင်သာကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အရက်မှီခို၏အခြေအနေတွင်၌ဤအယူအဆဖြေရှင်းရန်။
ပုံစံ၊ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သူများ:
non- abstinent လေးလံသောလူမှုရေးသောက်သူများ (n = 21, 5.0 ± 1.5 အချိုရည်များ / တစ်နေ့၊ ၄ င်းတို့ထဲမှ 13 သည်အရက်ကိုမူတည်နေပြီး DSM-IV အရ) နှင့်ပေါ့ပါးသောလူမှုရေးသောက်သူများ (n = 10, 0.4 ± 0.4 အချိုရည်များ / နေ့) ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် cue-reactivity အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ အရက်ယမကာနှင့်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှု၏ရုပ်ပုံများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
dorsal striatum အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများသည်လူမှုရေးသောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသည်။ လူမှုရေးအရအရက်သောက်သူများသည်လူမှုရေးသောက်သုံးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ventral striatum နှင့် prefrontal နေရာများတွင် fMRI လှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် [P စိတ်ဝင်စားမှုလေ့လာမှုဒေသ၊ P <0.05 မှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု] နှုန်း (FDR) -corrected ။ အလားတူစွာအရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများတွင် ventral striatal activation obsessive-compulsive တဏှာနှင့်အဆိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်ထို့အပြင်ငါတို့အားလုံးပါဝင်သူများအတွက် dorsal striatum နှင့် obsessive-compulsive တဏှာအတွက် cue- သွေးဆောင် activation အကြားအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုရေးတွင် ventral striatum ၏ cue- သွေးဆောင်ခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းနှင့် dorsal striatal activation ကိုအလွန်အကျွံသောက်သူများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ prefrontal ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုခြင်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်အရက်များကိုကြည့်ရှုသည့်အခါလူမှုရေးသောက်သူများသည် cortical ထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်သည်ဟုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရအရက်သောက်ခြင်းသည် hedonic သို့မဟုတ် compulsive ဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုဆိုင်ရာသုတေသနကိုခွဲခြားရန်အကြံပြုသည်။